Loza amin�atambo !
Salam ave ry Jean ? Efa loza amin�atambo anie ity mitranga ity e ! Tsy henonao sy tsy hitanao mihitsy ve ireny dorodoro sy kantsankantsana eran�ny tan�na ireny ?
Io izany izao tsy misy hakanatitra eny amin’ny manampahefana izany intsony fa rehefa manao ny tsy mety dia lasa iharan’ny daroka sy famonoana ho faty an-kalamanjana avy hatrany ! Na ireo mpitandro ny filaminana aza efa mialangalana mihitsy amin’ilay izy ! Mba henonao ve izany lazaiko izany e ? Na izaho koa aza moa ity lasa mila hivadika atidoha amin’ilay zava-mitranga. Mba eritrereto ihany ny atao a ! Dia avela hifamono eto foana ve ny mpiray tanindrazana e ? Dia avela hambanian’ny olona eto foana ve e ? Havela hotsinotsiniavin’ny olona eto foana ve ? Ianareo ho aho mba mahaiza mitsinjo lavitra fa tsy hoe donin’olona tapany dia handoa erany foana. Raha tsy mbola mandray izany teniko izany aloha ianao ry Jean dia mieritrereta fa mety ho efa any amin’ny tontolon’ny hafa angamba ka !